Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Wararka Dowladda » Guddi cusub oo loo doortay Xubnaha UNWTO ku xidhan
Ururka Dalxiiska Adduunka, UNWTO waa urur dawli ah, UNWTO waxay leedahay 159 Dawladood oo Xubin ah, 6 Xubnood oo Xiriir ah, 2 Kormeerayaal iyo in ka badan 500 oo xubnood oo xiriir la leh.
Xubnaha xiriirka la leh waa wakiilada ururada ama shirkadaha gaarka ah. Ma codeeyaan doorashooyinka dawladda, sida doorashada Xoghayaha Guud, laakiin waxay door muhiim ah ka ciyaaraan sidii ay qaybta gaarka ah u siin lahaayeen cod gudaha Hay'adda Dalxiiska ee Qaramada Midoobay.
Dhinaca bandhigga ganacsiga safarka ee FITUR ee dhawaan la soo gabagabeeyay ee magaalada Madrid, Spain, xubnaha 23 ee Guddiga Xiriirku waxay u codeeyeen Hotel Business Association Madrid (AEHM) oo ah Guddoomiye, oo ay matasho Ms. Mar de Miguel, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta; Rugta Dalxiiska ee Argentina oo ah guddoomiye ku xigeenka 1aad oo uu wakiil ka yahay Mudane Gustavo Hani, Madaxweyne; iyo Chameleon Strategies oo ah gudoomiye ku xigeenka 2aad oo uu matalo Mr. Jens Thraenhart, maamulaha guud.
Mr. Jens Thraenhart waxa uu sameeyay ciwaanno caalami ah oo wakhtigan noqday maamulihii ugu horeeyay ee Golaha Dalxiiska ee Barbados kadib markii lagu dhawaaqay Jamhuuriyada Barbados.
Doorashadii ka dib, Guddoomiyaha cusub, Ms. Mar de Miguel, ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay kalsoonida ay siiyeen guddiga intiisa kale, waxayna muujisay sida ay diyaarka ugu tahay inay ka shaqeyso sidii ay awood buuxda ugu furi lahayd isku xidhka xubnaha ururka UNWTO qalab lagu horumariyo dalxiiska wanaagsan, kor loogu qaado iskaashiga dawladda iyo gaarka ah iyo dardargelinta soo kabashada qaybta.
Zurab Pololikashvili, oo ah Xoghayaha Guud ee UNWTO, ayaa faallo ka bixisay: “UNWTO waxay diyaar u tahay inay si gacan-ka-ciyaar ah ula shaqeyso Guddiga cusub ee Xubnaha Xiriirinta, waxaana jeclaan lahaa inaan shakhsi ahaan ugu hambalyeeyo Guddoomiyaha iyo ku-xigeennada la doortay ee shaqada adag qabtay. Waxaan u rajaynayaa sida ugu wanagsan ee doorkooda cusub.”
Guddiga Xubnaha Xiriirku waa hay'adda matalaysa ee ka badan 500 oo xubnood oo ka tirsan UNWTO. Waxaa ka mid ah hawlaheeda, inay u soo jeediso talooyinka iyo soo jeedinta Xoghayaha Guud ee diyaarinta Barnaamijka Shaqada ee Xubnaha Xiriirinta iyo su'aal kasta oo ku saabsan Xubinnimada Xiriirinta.
Ka dib ansixinta at the Shirweynihii 24-aad ee UNWTO ee Qaab-dhismeedka Sharci ee cusub ee Xubnaha ku bahoobay, kaas oo sii qoto dheereeyay awoodaha Guddiga, waxaa loogu yeeri doonaa in laga shaqeeyo xoojinta doorka Xubnaha Xiriirinta ee ururka iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya waaxda gaarka ah ee dalxiiska iyo UNWTO ee Dawladaha xubnaha ka ah.
Argentina Barbados Business Hotel Madrid Dalxiiska Qaramada Midoobay
Dalxiiska Seychelles ayaa qabata kulankii ugu horreeyay ee suuqgeyneed ee 2022
Baraf aad u wayn ayaa xidhay madaarka Istanbul
Cunto Degdeg ah oo Cusub oo Wada Jir ah oo ku Balaadhinaysa Takhasuska leh ee...